राजकुमार बगर : जो लोकदोहोरी र आधुनिक दुवैमा चले - Kohalpur Trends
उडेर जून छुन्छु भन्थेँ
तर आज पिंजडाको चरी भा’छ जीवन
जुगौंजुग जिउँछु भन्थेँ
तर आज आफ्नै काखमा मरिरा’छ जीवन,
दुई दशकअघि यो गीत नगुनगुनाउने कमै थिए होला । अहिले पनि संगीतप्रेमीका लागि कम रूचिको छैन यो गीत ।
रामभक्त जोजिजू पोखराबाट काठमाडौं आएका थिए । २०५५ सालमा रेडियो नेपालको वाषिर्कोत्सवमा यही गीत गाए । गीत लेखेका थिए, राजकुमार बगरले । त्यसमा संगीत भरिदिएका थिए, बी.बी अनुरागीले ।
गीतले गायन र शब्दमा प्रथम स्थान हासिल गर्यो । त्यसको अर्को वर्ष गीत रेकर्ड भएर सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक हुनेबित्तिकै गीत संगीतप्रेमीको ओठओठमा गुञ्जिन थाल्यो । प्रेममा होस् कि करिअरमा, असफल हुनेहरूले सायद गीतभित्र आफ्नै कथा भेटे र रूचाइदिए ।
उक्त गीत सार्वजनिक भएको दुई दशकपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै गीतकार तथा संगीतकार राजकुमार बगरले भने, ‘त्यो मेरो पहिलो गीत हो । तर, त्यसलाई मेरो सांगीतिक करिअरकै ‘माइलस्टोन’ मान्छु । आजपनि धेरैले यो गीतबाटै चिन्नुहुन्छ ।’
राजकुमारले त्यसपछि सयौं गीत सांगीतिक बजारमा दिए । दर्जनौं गीत स्रोता/दर्शकले रूचाए । तर, आफ्ना पि्रय गीतमध्ये पहिलो नम्बरमै उनी लिन्छन्, ‘उडेर जून छुन्छु भन्थेँ ।’
‘यो गीत आएपछि म गीत लेख्न सक्ने रहेछु भन्ने आँट भयो’, उनले सुनाए । गीतले भनेझैं उनले सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम देखे, भविष्य देखे ।
नारायण रायमाझीले भने- ‘अब काठमाडौं आउनुपर्छ’
राजकुमारले दुई रातमा तयार गरे, ‘आमा ! रातो सारी चुरा पोते किन नला’को’ गीतले राम्रो चर्चा पायो । राजकुमार भन्छन्- त्यो गीत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, काठे गीत चल्ने क्षेत्रदेखि तराईसम्म रूचाइयो । त्यसको क्यासेटमात्रै डेढ लाख बिक्री भएको थियो रे !
अध्ययनका लागि पोखरा बस्दा रचना गरेको गीत ‘उडेर जून छुन्छु भन्थेँ’ त चल्यो तर गीतकारलाई चल्न गाह्रो थियो । त्यहि भएर राजकुमार बिएड सकेपछि तनहुँको खर्पुमा शिक्षण पेशामा लागेका थिए । बुवा इण्डियन आर्मी, खानलाउनको त समस्या थिएन । त्यसमाथि छोराको घरपायकको जागिर, बाबुआमा पनि सन्तुष्ट थिए ।
‘ज्यान विद्यालयमा, मन गीत-संगीततिर थियो’ उनले स्मरण गरे, ‘काठमाडौं आउने मन त थियो तर कसरी आउने, कहाँ बस्ने ? के गर्ने ? तारतम्य मिलिरहेको थिएन् ।’ पहिलो गीत चलेपछि गायक तथा संगीतकार नारायण रायमाझीसँग राजकुमारको चिनजान भएको थियो ।
नारायणले भने, ‘तपाई तनहुँमा बसेर हुँदैन । अब काठमाडौं आउनुपर्छ ।’ त्यतिमात्र भनेनन् उनले आफ्नै स्टुडियो रिमा रेकर्डिङमा जागिरसम्म दिए ।
‘त्यति भएपछि मलाई के चाहियो, पढाउन छाडेर काठमाडौं आएँ’ राजकुमार सम्झन्छन्- घरपरिवार तथा साथीभाइबाट ‘मान्छे सरकारी जागिर खान मरिहत्ते गर्छन्, तलाईं घरपायकको यस्तो जागिर छोड्ने?’ भन्ने गुनासो सुन्नुपर्यो ।
‘आमा ! रातो सारी चुरा पोते किन नला’को’बाट व्यवसायिक यात्रा
राजकुमार बगर नारायण रायमाझीको स्टुडियोमा काम गर्थे । संगीतकार भोजराज काफ्लेले छोरा दिनेश काफ्लेलाई गीत गाउन लगाउन चाहिरहेका थिए । नारायण रायमाझीले गीत लेख्नका लागि राजकुमारलाई भन्न सिफारिस गरे । भोजराजले ‘ड्वेट बनाऔं, आमाछोराको कथामा बनाऔ’ं भनेर ‘हिन्टस्’ दिए ।
राजकुमारले दुई रातमा तयार गरे, ‘आमा ! रातो सारी चुरा पोते किन नला’को’ । गीतले राम्रो चर्चा पायो । राजकुमार भन्छन्, ‘त्यो गीत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, काठे गीत चल्ने क्षेत्रदेखि तराईसम्म रूचाइयो । त्यसको क्यासेटमात्रै डेढ लाख बिक्री भएको थियो रे !’
त्यो गीतबाट राजकुमारले केही पारिश्रमिक पाए । अन्य गीत लेख्दै गए । लोकदोहोरीमा व्यवसायिक गीत लेखनको सुरुवात आफूले गरेको उनी दाबी गर्छन् ।
‘त्यो समयसम्म लोकदोहोरी लेखेर पारीश्रमिक पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने संस्कारै रहेनछ । त्यसपछि गीत लेख्नेलाई थोरै भए पनि पारिश्रमिक दिन थालियो’, उनले भने ।
‘मिर्मिरेको घाम’, ‘माफ गर भूल भए’, ‘माया नमार’ जस्ता राजकुमारका गीत एकपछि अर्को गर्दै बजारमा आए । र, चर्चा पाउँदै गए । उनले छोटो समयमै २०६२ सालमा आफ्नै ‘त्रिवेणी रेकर्डिङ स्टुडियो’ खोले ।
क्यासेटमा नयाँ प्रयोग
रेकर्ड भएका सबै गीत चर्चामा आउँदैनन् । गीत चर्चामा आए पनि गायक-गायिकालाई जस्तो गीतकारलाई धेरैले चिन्दैनन् । राजकुमार भने यसको अपवाद बने । उनको चर्चा कुनै गायक-गायिकाको भन्दा कम भएन ।
त्यतिबेलासम्म स्रोताले चिन्ने हिसाबले गायक-गायिकाको फोटोमात्र कभरमा आउँथ्यो । गीतकारको फोटो पछाडिपट्ट िराखिन्थ्यो, सानो फोटो अनि सानै अक्षरमा । ‘त्यतिबेलासम्म गायक-गायिकाको फोटोमात्र हाइलाइटमा आउँथ्यो’, उनले सम्भिmए, ‘मैले एल्बममा आफ्नै नाम, आफनै फोटोलाई हाइलाइटस गरेँ ।’
यसरी पहिलोपटक ल्याएको एल्बम थियो, ‘मिर्मिरेको घाम’ । सौभाग्य, राजु परियार र लक्ष्मी न्यौपानेको आवाजमा रहेको गीत राम्रो चल्यो । त्यसपछि उनले यो प्रयोगलाई निरन्तरता दिए ।
‘ईख’ले संगीतकार पनि
लोकदोहोरी गीतहरू ‘ब्याक टू ब्याक’ चलिरहेका थिए । उनले केही लोकदोहोरी गीतमा संगीत समेत दिएका थिए । तर, उनलाई संगीतकार भन्दा गीतकारकै रूपमा स्थापित हुनु थियो । तर, समयले उनलाई लेखिरहन मात्र दिएन ।
एकदिन निकै मिहिनेत गरेर गीत लेखे । एकजना संगीतकारकहाँ पुगे । उनले गीत मनपरेको बताउँदै कम्पोज गरेपछि सम्पर्क गर्ने बताए । मुम्बईमा रेकर्ड गर्ने योजना पनि सुनाए । तर पर्खाइमा चार वर्ष बित्यो । धेरै वर्षसम्म रेस्पान्स नआएपछि आफैं ‘ट्राई’ गर्नुपर्छ भन्ने राजकुमारलाई लाग्यो ।
यसपछि आफ्नै शब्द र संगीतमा उनको गीत रेकर्ड भयो, ‘तिम्लाई आफ्नो भन्ने मेरो अधिकार गुमेपछि ।’ अञ्जु पन्तको स्वरमा २०६८ सालमा यो वियोगान्त गीतलाई स्रोताले रूचाए । राजकुमार सुनाउँछन्, ‘डर लागको थियो, तर एकदमै राम्रो भयो । मेरो आत्मविश्वास पनि बढ्दै गयो ।’
त्यसपछि उनले अन्य थुप्रै आधुजिक गीतमा संगीत भर्ने अवसर पाए ।
लोकदोहोरी र सुगम संगीत दुवैमा राजकुमार
राजकुमारले झण्डै १३ सय गीत नेपाली संगीत बजारलाई दिइसकेका छन् । त्यसमध्ये दर्जनौं गीत जनजिब्रोमा झुण्डिएका छन् । चाहे त्यो लोकदोहोरी होस्, या आधुनिक ।
‘उडेर जुन छुन्छु भन्थेँ’, ‘यता कुलो काट्दाखेरी’, ‘तिमीलाई आˆनो भन्ने मेरो’, ‘किन शंका गर्छौ मेरो’, ‘सुने खबर जीवनसाथी’, ‘तिमी छौ र पो हाँसेको छु म’ जस्ता आधुनिक गीत चले । ‘मिर्मिरेको घाम’, ‘मनको देउतैले’, ‘माफ गर भूल भए’, ‘मस्र्याङ्दीमा फूल बगाम् भो’, ‘र्फक मुग्लानी’ जस्ता लोकदोहोरी गीत रूचाइए । दुई दशकदेखि गीत लेख्न थालेका राजकुमारको जोश-जाँगर अहिले पनि उस्तै छ ।
एक दशक अगाडिसम्म लोकदोहोरी गीतमा बढी व्यस्त रहेका राजकुमार हिजोआज भने आधुनिकतिर बढी व्यस्त छन् । भने, ‘एउटा व्यापारीले जे बढी माग छ त्यही बढी बिक्री गर्छ भनेझैं मैले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको छु ।’
राजकुमारले संगीतको ‘ट्रेन्ड’ केलाए- ‘अहिले युट्युब र स्टेजमा आश्रति हुनुपर्दा भ्यूज पाउने र स्टेजमा दर्शकलाई उचाल्ने खालका गीतहरू बन्ने क्रम बढ्यो । यसले कालजयी भन्दा उच्छृङ्खल गीत बढी आए ।’
राजकुमारका अनुसार सुरुवाती दिनमा गीतकारलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ-लिनुपर्छ भन्ने संस्कार थिएन । उनका अनुसार आधुनिक गीतमा अग्रजहरू गीत लेख्थे । उनीहरू राम्रो संगीतकारलाई मेरो गीत गाइदेऊ भन्थे । गीत त्यसै बाँड्ने चलन थियो । विस्तारै केही पारिश्रमिक दिने संस्कार बस्दै गयो ।
अहिले पनि गीतकारलाई खुलेर पारिश्रमिक दिने संस्कार नभएको राजकुमार गुनासो गर्छन् । ‘हिजोआज म्युजिक भिडियोमा लाखौं खर्चिनेहरू, मोडललाई बिना संकोच खर्च गर्नेहरू गीतकारलाई पारिश्रमिक दिन गाह्रो मान्छन्’, उनी सुनाउँछन् ।
गीत लेखेरमात्र जिविकोपार्जन गर्नेहरू अहिलेपनि निकै कम भएको र गीत मात्रै लेखेर बसेको भए आफू पनि नटिक्ने बताउँछन् ।
उनले आफू चल्नका लागि स्टुडियो खोले । कम्पोज गर्न थाले, त्यसैले केही सहज भयो ।
उनले हेर्दाहेर्दै अडियो-क्यासेटको जमाना गयो । सीआरबीटीको जमाना गयो । अहिले कलाकारको आम्दानीको स्रोत युट्युब र स्टेज कार्यक्रम भएको छ ।
युट्युबमा पनि १ सय गीतमा ९९ गीतहरूले लगानी उठाउन गाह्रो भइरहेको राजकुमारको बुझाइ छ ।
‘६० को दशक गीत-संगीतका लागि स्वर्णयुग थियो । आम्दानी पनि राम्रो थियो’ उनले संगीतको ‘ट्रेन्ड’ केलाए- ‘अहिले युट्युब र स्टेजमा आश्रति हुनुपर्दा भ्यूज पाउने र स्टेजमा दर्शकलाई उचाल्ने खालका गीतहरू बन्ने क्रम बढ्यो । यसले कालजयी भन्दा उच्छृङ्खल गीतहरू बढी आए ।’
कसरी फुर्छ गीत ?
‘गीत एक दिनमा लेखेको, एक हप्तामा सिर्जना गरेको भन्छन्,’ उनले भने ‘तर, गीत सिर्जनाको ठ्याक्कै समय हुँन्छ म भन्दिन् ।’ शब्द फुरेपछि, वा मनमा छोएपछि एकै बसाइमा गीत सिर्जना हुने उनले सुनाए ।
उनले आफ्नो चर्चित गीत ‘यता कुलो काट्दा..’को रचनागर्भ यसरी सुनाए-
गाउँमा हामी तीनजना घनिष्ठ साथी थियौं । ठूलो एकादशीमा दुलेगौंडा र दमौलीमा मेला लाग्छ । हामी प्रायः दुलेगौंडा जान्थ्यौं । थर्भु भन्ने स्थानमा झर्यौं । एउटा साथीले दुलेगौंडा जाऔं भने, अर्कोले दमौली । मलाई कता जाने भन्न थाले । मलाई आपत पर्यो । दमौली जाऔं भने एउटा रिसाउने, दुलेगौंडा जाऔ भने अर्को रिसाउने ।
एउटा त रिसाउने नै भयो भन्ने लाग्यो । मैले सोचेँ सबैको मन राख्न सकिँदैन रहेछ । जस्तो विवाह गरेर घरमा बुहारी आउँछ । घरमा खटपट पर्दा आमाको कुरा काट्यौं भने जन्म दिने आमाको कुरा कसरी काटौं । श्रीमतीको कुरा काटौं भने जीवनसाथीको कुरा कसरी काट्ने ।
कसको मन राख्ने ? यहि सोचबाट गीत बनाए, ‘यता कुलो काट्दाखेरी उताको खेत सुक्यो अरे ।’
तस्वीर : चन्द्र आले/अनलाइनखबर
Previous Previous post: प्रचण्डको दाबी : केही दिनमै नयाँ सरकार, चुनावमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी
Next Next post: बाँकेमा एक सय ९ जना सक्रिय कोरोना संक्रमित